Albaabka ayuu tegey oo ku garaacay, dadkii guriga ku jirey markay ogaadeen inuu Cumar yahay ayaa Khabaabna dhuuntay, gabadhiina waraaqihii qur’aanku ku yiilley xaseysey qarisay. Markaas ayuu arkay haweenay iyo caruurteeda oo oynaya, iyo digsi dabka saran. Sidoo kale wuxuu Cumar yiri “waxaan is weydiiyey ninka ugu warqaadka badan reer Makka oo dadka oo dhan hadalka gaarsiin kara, waxaan xasuustay inuu yahay Sumeyn ibnu Camar al-juhani”, markaasaan u tegay oo ku iri “waan islaamay ” markaasuu u qeyliyey isagoo leh “Cumar ibnu Khadhaab waa iishay” Cumarna wa ka daba hadlay isagoo leh “ma iilane waan islaamay”. Waxaa laga keenay ” https: Haweenaydii oo aad u faraxsan ayaa Cumar rc ku tiri: Cumar Amiir al-Mu’miniin ingiriis: In other projects Wikimedia Commons. D 26 Dulhijjah 23 Hijri , wuxuu ahaa saaxiibka labaad ee Nebi Muxamed , hogaamiyihii sadexaad ee Dawladda Islaamka , asxaabi ka mid ah Kulafo Raashidiinta iyo mid ka mid ah asxaabta rasuulka.
In other projects Wikimedia Commons. Cumar markuu arkay meeshay xaaladdu marayso iyo dhibkuu reerka u geystey siiba walaashiis, ayaa naxariis qabatay, markaasuu tartiib ula hadlay oo yiri “i tus waxaad akhrineyseen”, waxay dheheen “waxaad tahay nijaas ee soo qubeyso haddaad rabtid inaan ku tusno”, wuu soo meyrtay markuu soo taabtayna waraaqdii ay akhrinayeen oo ay ku taallay suuratu Dhah ayey u dhiibeen. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Waxa uu ahaa ruuxii ugu horeeyay ee sameeya kalandarka Taariikhda Islaamka ee Hijriga. Cumar rc oo u la socdo gacan yarihiisii Aslam ayaa markaas soo aaday dhanka magaalada ilaa uu gaaray Baytul Maalkii. Biyo caruurta lagu sasabo ayaa saaran ayay ugu jawaabtay. Cumar markii guriga laga furay ayuu gabadhii ku yiri “keen wixii aad akhrineyseen”, markey u diideenna Siciid ayuu la dagaallamay, markaasay gabadhii difaacday ninkeedii ilaa uu iyadii dakharro gaarsiiyey. D — 03 Nofember C.
Waxaa laga keenay ” https: Intii nebigu noolaa, Cumar bin Khattab wuxuu ahaa saaxiibka iyo la-taliyaha labaad ee Nebi Muxamed asagoo kala qeyb galay arimo aad u badan.
Markaas ayuu arkay haweenay iyo caruurteeda oo oynaya, iyo digsi dabka saran. Cumar ayaa ku adkaystay, kuna yiri Aslam: Haweenaydii oo aad u faraxsan ayaa Cumar rc xomali tiri: Kadib ayuu haweenaydii waydiiyay waxa keenay oohinta caruurta.
Inaan iska fiirsado faraxooda ayaan jeclaystay. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal.
MUSALSALKA CUMAR BINU KHADAAB XALQADII 26AAD
Markaas ayuu bilaabay inuu soo raro cunto kala duwan, saliid, bariis, subag iyo xogaa lacag ah. Cumar bin al-Khattab Af-Carabi: Markii ay tageen jovie ayuu Cumar rc digsi ka buuxiyay raashin, ilaa uu ka bislaado, hadana u soo riday caruurtii, iyaga oo ka dhargay isla markiina bilaabay cayaar.
Si kastaba ha ahaatee, goortii Nebi Muxamed geeriyooday waxaa khulafo Raashidiintu si waafaqsan dardaarankii nebiga isla garteen in Abu Bakr lagu wareejiyo hogaanka iyo talada maamulka dowladii Islaamka. Khabaab oo dhuumanayey ayaa markuu maqlay hadalka Cumar iyo siduu u soo dabcay ayuu soo baxay oo ku yiri “Cumarow waxaan rajaynayaa iney kugu dhacday ducadii Rasuulka SCW kolkuu lahaa “Ilaahow laba Cu,ar Cumar binu Khadhaab iyo Abii-jahal midkaad kheyr ku og tahay islaamka ku xooji”.
Markuu khadazb buuxiyay ayuu ka codsaday Aslam inuu dhabarka u saaro. Qoraalkaagu ha noqdo mid faa’iido leh oo dhexdhexaad ah. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Hadaba digsiga maxaa saaran ayuu waydiiyay. Aslam ayaa markaas Cumar rc u saaray dhabarka iyaga oo bilaabay inay aadaan dhankii guriga haweenaydii baahnayd.
Cumar isla markiiba wuxuu qaadey tallaabooyin wuxuuna yri “waxaan is weydiiyey ninka dadka ugu neceb islaamak markaasaan xasuustay inuu Abii-jahal yahay, markaasaan gurigiisii ugu tegey oo ku garaacay, albaabka ayuu iga furay blnu i soo dhoweeyey yirina “maxaad iigu timid Cumar”, waxaan ku iri “waxaan kuugu imid inaan ku ogeysiiyo inaan islaamay oo rumeeyey Alle iyo Rasuulka SCWwaxaan haysan jirneyna aan beeniyey”, Abii-jahal intuu naxay ayuu yiri “waxaad la timid baa xumaaday” gurigii buuna ku cararay.
Abu Bakr Sadiiq Wakhtiga Hogaanka: Waxa uu kamid ahaa tobankii Saxaabi ee loogu bishaareeyay janada iyaga oo ifka jooga. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo.
Fatima bint al Khattab. In other projects Wikimedia Commons. Cumar oonan wali isu sheegin ayaa markaa waydiiyay waxa uu u qaban karo asaga oo markaas ilin badan ka qubanayso. Allaah wuxuu u soo hooyey dadkii muslimiiinta ahaa cissi waxayna bilaabeen in waxyaalo badan oo ay la dhuuman jireen ay bannaanka binuu dhigaan siduu Bukhaari ka mvie Cabdullaahi ibnu Mascuud inuu yiri “kama aannaan suulin cissi intuu Cumar islaamay”.
Qaab adeegsi kale, khdaaab Cumar faah faahin.
Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda. Cumar ayaa markaa aaday gurigii walaashii isagoo xanaaqsan, markuu gurigii irriddiisii soo marayo ayuu maqlay Qur’aan la akhrinayo waxaana guriga joogey walaashiis, ninkeedii iyo Khabaab oo qur’aan u akhrinayey. Gaajo inay hayso ayay u sheegtay Amiirka. Waxaa kale oo Cumar sameeyey markuu islaamay ayuu Rasuulka SCW ku yiri “Rasuulkii allow sow xaq kuma taagnin, waa inaan baxnaa oo dhammaanteen aan kacbada ku soo tukannaa”, Rasuulkuna SCW waa ka yeelay, markaasaa waxaa soo baxay asxaabtii oo laba saf ah oo safna Cumar ku jiro safna Xamsa.
Cumar markii guriga laga furay ayuu gabadhii ku yiri “keen wixii aad akhrineyseen”, markey u diideenna Siciid ayuu la dagaallamay, markaasay gabadhii difaacday ninkeedii ilaa uu iyadii dakharro gaarsiiyey.
WATCH THE MYSTERY OF CHESSBOXIN ONLINE
Wakhtigani waxaa dhacday khilaaf aad u wayn oo dad badan ayaa diinta Islaamka dib uga noqdey maadaama nebigii waxyigu ku soo dagayay geeriyooday.
Biyo caruurta lagu sasabo ayaa saaran ayay ugu jawaabtay. Intuu Aslam jaleecay ayuu yiri:. Waa inaan aniga xanbaaro jawaankan maadaama Maalinta Qiyaamo aniga la I waydiin doono. Somail caruurtaan way ooyaysay, iminkana way qoslayaan oo cayaar ayay ku jiraan.
Cumar iyo Xamsa markay soo islaameen Ilaahay s. Qureysh talo ayaa ku caddaatay waxayna ka caroodeen waxyaalaha uu Cumar sameeyey, waxay markaa ku tashadeen ineyba dilaan hase yeeshee waxaa arrintaa is hor taagay Cumarna gaarsiiyey Caas ibnu Waa’il. Albaabka ayuu tegey oo ku garaacay, dadkii guriga ku jirey markay ogaadeen inuu Cumar yahay ayaa Kahdaab dhuuntay, gabadhiina waraaqihii qur’aanku ku yiilley xaseysey qarisay.
Cumar Kani waa maqaal ku saabsan Soomali Cumar. Maqaalkan waa la bilaabay. Asxaabtii markay arkeen Cumar, ayaa la yiri “waa Cumar”, markaasaa Xamsa oo muddo yar ka hor sii islaamay meeshana joogey yiri “soo daaya, hadduu wanaag u socdana waan arkaynaa, somalo xumaan u socdana seeeftiisaan ku dileynaa’. D — 03 Nofember C. Cumar bin Khattab wuxuu ahaa xumar ugu awooda badnaa khulafo al-Raashidiinta kaasi oo meel sare kaga jirey maamulka Dawladda Islaamka intii uu Nebigu noolaa iyo markii uu geeriyoodayba.
Waxa uu ahaa ruuxii ugu horeeyay ee sameeya kalandarka Taariikhda Islaamka ee Hijriga. Aslam ayaa diiday asaga oo ka xishooday inuu Amiirka Muslimiinta jawaan buuxo dhabarka u saaro. Kadib ayay bilowday inay eed dusha uga tuurto Cumar ayada oo ku eedaysay inuu iska indhatiray dhibka haysta iyada iyo caruurteeda.
Cumar gurigii ayuu galay, ka dibna halkaa ayuu ku soo islaamay. Qoraalka gudaha oo kooban. Habeen ka mid ah habeenada ayaa waxaa dhacday inuu Amiirkii Muslimiinta ee wakhtigaas, Cumar Ibn Khattab ilaahay ha ka raali noqdee oo dhex qaadayay xaafadaha Madinal Munawarrah si uu ogaado dareenka iyo dhibtaada dadkiisa.
Cumar intuu durba aad isu beddelay oo Ilahay qalbigiisa hanuun ku soo riday ayuu yiri “xaggee joogaa Nabigii? Hadii aad wax ka taqaanid fadlan ku caawi Wikipedia in aad Wax ku dartid. D magaalada Makka ee dhulka Carabta, isla markaana dhintey 03 Nofember C. Cumar isagoon weli hubkiisii iska dhigin ayuu meeshii tegey oo ku garaacay gurigii Rasuulka SCW iyo asaxaabtiisu ay joogeen.